काजकिरिया नसकिँदै कास्कीमा विद्या भट्टराईको चर्चा – Hotpati Media
काजकिरिया नसकिँदै कास्कीमा विद्या भट्टराईको चर्चा
२० फाल्गुन २०७५, सोमबार ०७:५९ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको कास्की २ को उपनिर्वाचन तात्तातै गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली जुटेका छन् । यसका लागि उनले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको र रवीन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई चुनावको तयारी गर्न सन्देश पठाएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री अधिकारीको गत बुधबार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अधिकारीले कास्की २ बाट चुनाव जितेका थिए ।
हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको खबर सुनेको केही घन्टापछि नै प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई भेट्न मन्त्री निवास पुल्चोक पुगेका थिए । त्यतिबेलासम्म श्रीमती भट्टराईले बैंगलोरमा रहेका जेठा छोरालाई टेलिफोन गरी बोलाइसकेकी थिइन् भने पोखरामा रहेका सासू सुसुरा तथा कान्छा छोरालाई फोन गर्दै धैर्य गर्न आग्रह गरिसकेकी थिइन् । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेर भने– ‘चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाऊ ।’ पहिलो भेटमै यति हतारमा ओलीले चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाउन किन आग्रह गरे ? भन्ने कुराको भेउ त्यहाँ उपस्थित भएका आफन्तजन तथा साथीहरूले पाउन सकेनन् । शोकमा रहेकाले ध्यान अन्यत्रै मोड्न ओलीले उक्त आग्रह गरेका हुन् भनौं भने पनि श्रीमती भट्टराईले आफूलाई सम्हालिसकेको सहभागीहरू बताउँछन् । एक सहभागीका अनुसार हेलिकोप्टर हराएको आधा घन्टापछि उनको मोबाइलमा घन्टी बजेको थियो । त्यतिबेला उनी आफू प्राध्यापनरत आरआर क्याम्पसको प्रांगणमा साथीहरूसँगै घाम तापेर बसेकी थिइन् । टेलिफोनमा छोटो कुराकानीपछि उनी जुरुक्क उठिन् र अलि मलिन अनुहार लगाउँदै भनिन्– ‘म निस्कनुपर्ने भयो, गएँ है ?’ त्यसपछि उनी ट्याक्सी लिएर सरासर मन्त्री निवासतर्फ गइन् ।
गत निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट चुनाव हार्नासाथ आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई सान्त्वना दिँदै वामदेवले भनेका थिए– ‘यो चुनाव हार्दैमा आत्तिनुपर्ने छैन, कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराई उपनिर्वाचन लडेर यो पाँच वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री बन्ने छु ।’ त्यसबेलादेखि नै गौतमले उपनिर्वाचनका लागि कुनै क्षेत्र खाली गर्ने गृहकार्य गरे । सुरुमा ललितपुर १ ताके । जहाँबाट एमालेको टिकटमा पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालले चुनाव जितेका थिए । तर वामदेवको यो अभियान सफल भएन । त्यसपछि डोल्पा ताके, काठमाडौं ७ ताके । कहीँ पनि सफल हुन नसकेपछि ओलीसँग क्रोधित भएका गौतम अब कास्की २ जाने बलियो अनुमान गरिएको थियो । तर उनले प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै ‘मैले रवीन्द्रको क्षेत्र ताकेको छैन, यो क्षेत्रमा उनकै श्रीमती चुनाव लड्नेछिन्’ भन्न बाध्य भए ।
को हुन् विद्या ?
दिवंगत नेता रवीन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराई विगत डेढ दशकदेखि आरआर क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छिन् । त्यसअघि उनी अनेरास्ववियुकी सचिवालय सदस्यसम्म भएकी थिइन् । स्कुल पढ्दादेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय विद्या र रवीन्द्रको चिनजान राजनीतिमा सक्रिय रहेकै बेला भएको हो । विवाह हुँदा रवीन्द्र अनेरास्ववियुको महासचिव र विद्या सचिवालय सदस्य थिए । २०५४ सालमा एमाले विभाजन भएपछि रवीन्द्र माले अखिलको अध्यक्ष भए भने विद्याका दाजु राजन भट्टराई एमाले अखिलका अध्यक्ष भए । विद्या दाजुको पक्षमा नलागी श्रीमान् रवीन्द्रकै पक्षमा लागिन् । र, उनले साथ दिएका कारण अखिलमा बहुमत जुटेको थियो ।